Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny anjara asan'i Etazonia amin'ny UNWTO Vaovao?
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Editorial • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Espaniola • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Sarotra ho an'ny minisitry ny fizahantany ny mandeha any Madrid amin'ny faran'ity volana ity mba hamolavola tantara ho an'ny UNWTO vaovao. Mety ho very vintana ihany koa ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO ny haneho fitarihana sy ho mpisava lalana ho an'ny UNWTO ho avy sy vaovao, raha mijanona ao an-trano izy ireo na mandefa ambasadaoro hanao ny asan'ny minisitry ny fizahantany amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy any Madrid Novambra. 28 – 3 Desambra.
Etazonia, Aostralia ary Royaume-Uni dia firenena matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany maneran-tany, fa tsy mpikambana ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO).
Solontena, mpanolo-tsaina lafo vidy, ary manam-pahaizana hafa avy amin'ireo firenena ireo dia nokaramain'ny UNWTO sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny consultation, fikarohana ary asa hafa, raha toa ka tsy mandoa saram-pikambanana ny fireneny.
Moa ve ny rafitra vaovaon'ny UNWTO hamerina an'i Etazonia sy ireo firenena matanjaka hafa amin'ny fizahantany ao amin'ity masoivoho mpiara-miombon'antoka amin'ny Firenena Mikambana ity ho mpikambana mandoa vola?
Etazonia dia mpikambana mpanorina ny UNWTO. Ho an'i Etazonia dia mbola manana fiantraikany goavana amin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany ary World Tourisme amin'ny ankapobeny, fa ny tsy fandoavana ny saram-pikambanana dia nahatonga ny UNWTO ho lasa tsy dia manan-danja loatra, tsy dia marin-toerana ara-bola, ary tsy dia maha-mpitarika hajaina ho an'ny sehatra ho an'ny daholobe eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany.
Amin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany 2016, ny foNilaza ny minisitry ny fizahantany any Zimbaboe, Dr. Walter Mzembi eTurboNews: “Amin'ny Andro maneran-tany ho an'ny fizahantany amin'ny 2016, feno hevitra aho.”
Naniry ny hanatevin-daharana ny UNWTO tsy miankina i Mzembi ny fanjakana sy ny faritany rehetra amerikana. Raha jerena ny fanjakana tsirairay dia efa tena mahaleo tena amin'ny fizahantany ara-barotra ao anatiny sy ivelan'i Etazonia, dia tsy mitombina izany hevitra izany.
“Angamba izao no vahaolana ho an’ny firenena matanjaka indrindra eran-tany momba ny fizahantany, Etazonia, hiditra amin’ny fomba ofisialy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO). Ny vahaolana dia mety ho mpikambana vaovao 50 ao amin'ny UNWTO, fanjakana iray isaky ny mandeha, ”hoy i Mzembi eTurboNews.
Niresaka tamin'ny masoivohon'i Etazonia Harry K. Thomas, Jr., sy ny Dr. Walter Mzembi, kandidà mivantambantana ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO tamin'ny taona 2017 izy io, raha nanao fampielezan-kevitra hanoherana ny Sekretera Jeneraly ankehitriny Zurab Pololikashvili. .
UNWTO dia manohy mizara angon-drakitra, fikarohana ary olana hafa miaraka amin'i Etazonia sy firenena maro tsy mpikambana nefa tsy mahazo sarany. Mazava ho azy fa tsy maharitra izany.
Tamin'ny Jona 2019, nanomboka ny tsaho momba ny fiverenan'i Etazonia amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany. Nolavin'i Isabell Hill haingana izany, Tale, Birao nasionaly fitsangatsanganana sy fizahantany ao amin'ny Departemantan'ny varotra Amerikana, saingy tao ambadiky ny sehatra dia toa nandroso ny hetsika tamin'io lafiny io.
Izany dia tamin'ny Oktobra 2019, 6 volana talohan'ny nandravan'ny COVID-19 ny fizahan-tany. Izany no fiafaran'ny fitondran'i Trump tany Etazonia.
Ny Fifanarahana momba ny Toetr'andro Paris, ny fifanarahana nokleary Iran, ny Fiaraha-miasa Trans-Pasifika, ny UNESCO – ireo dia fifanarahana iraisam-pirenena na protocole rehetra notsoahan'i Etazonia hatramin'ny nametrahan'ny Filoha Trump ny fandaharam-potoanany “America First” tamin'ny fiandohan'ny fe-potoam-piasana voalohany.
Tamin'ny taona 2019, ny sekreteram-panjakana mpanampy Kevin E. Moley dia nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny UNWTO tany Madrid mba hiresaka bebe kokoa momba ny fiverenan'i Etazonia.
Tamin'ny volana Jona 2019, a Nanatrika ny fivorian'ny Filankevitra Mpanatanteraka tao Baku ny delegasiona White House, Azerbaijan. Tamin'izay fotoana izay ihany koa no nambara ny fikasan'i Etazonia hamerina hifampiraharaha amin'ny maha-mpikambana azy. "Ny Amerika Voalohany dia tsy midika hoe Amerika irery," hoy ny lefitry ny lehiben'ny mpiasa ao amin'ny White House.
Tamin'ny Jona 2019, rehefa nambara voalohany ny fahatsinjovana ny hiverenana amin'ny "fepetra mahasoa an'i Etazonia", dia namoaka fanambarana ny Departemantam-panjakana Amerikana fa "Mino ny Fitantanam-panjakana fa ny UNWTO dia manome hery lehibe hanohanana ny fitomboana ao amin'io sehatra io. asa vaovao ho an'ny Amerikanina, ary asongadino ny toerana tsy manam-paharoa sy ny kalitaon'ny toerana fizahan-tany amerikana. "
Ny ONU tamin'izany fotoana izany dia nahafaly ny fahatsinjovana ny hiverenan'i Etazonia. Tao anatin'ny fanambarana iray navoaka tamin'ny taona 2019, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili dia nilaza hoe: "Tena mampahery fa i Etazonia dia nanambara mazava tsara ny fikasany hiditra indray amin'ny UNWTO ary hanohana ny fizahan-tany amin'ny maha-mpanentana fototra amin'ny famoronana asa, fampiasam-bola ary fandraharahana, ary fiarovana ny natiora. ary ny lova ara-kolontsaina maneran-tany.”
Ny herin'ny fizahan-tany hafa izay tsy mpikambana ao amin'ny UNWTO dia ny UK, Kanada ary Aostralia. Na dia niala noho ny antony samihafa aza ireo firenena ireo, ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso sy ny fahazoan-dàlana momba ny zon'olombelona ho an'ireo izay mivory ao amin'ny filan-kevitry ny mpanolo-tsaina dia fanakianana matetika amin'ny fikambanana.
The Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany mila ireo fahefana lehibe amin'ny fizahantany ireo ho mpikambana. Izany dia tsy natao ho an'ny vola ilaina maika ho an'ny mpikambana ihany, fa koa mba hitazonana ny toerana rehetra amin'ny maha-vondrona iraisam-pirenena ho an'ny sehatry ny fizahantany manerantany.
Miaraka amin'ny tsy fanarahan-dalàna maro be eo amin'ny mpitarika ankehitriny ao amin'ny UNWTO, miaraka amin'ny COVID-19 manosika ny fizahan-tany amin'ny fanamby lehibe indrindra hatrizay, ny fahatsinjovana ny fidirana an'i Etazonia dia lasa lavitra - sa tsia?
Isabel Hills, izay tsy ny Talen'ny Biraon'ny Fitantanam-pirenena sy ny fizahantany, Departemantan'ny Varotra, Etazonia ihany, fa ny filohan'ny Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Komitin'ny fizahantany, dia manana fidirana feno amin'ny antontan-taratasy sy fikarohana rehetra momba ny UNWTO, na dia tsy mpikambana aza i Etazonia, dia tsy nandoa saram-pikambanana ilaina maika ho an'ny UNWTO nandritra ny 10 taona farany.
Ny OECD dia sehatra iray ahafahan'ny governemanta mampitaha sy mifanakalo traikefa momba ny politika, mamantatra ireo fomba fanao tsara manoloana ireo fanamby mipoitra, ary mampiroborobo ny fanapahan-kevitra sy ny tolo-kevitra hamokatra politika tsara kokoa ho an'ny fiainana tsaratsara kokoa.
Ny tanjon'ny OECD dia ny hampiroborobo ny politika izay manatsara ny fiahiana ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an'ny olona manerana izao tontolo izao.
Ny toe-javatra ankehitriny
Miaraka amin'ny fianarana fizahan-tany ny fomba fiasa miaraka amin'ny COVID, nanomboka hetsika vaovao i Arabia Saodita sy Espaina ary efa nampiditra an'i Etazonia ho ao anatin'io fifangaroana io. Teo ambany fitarihan'i Saodiana, dia niforona ny Fiaraha-mientana ara-pizahantany iraisam-pirenena voalohany indrindra ao amin'ny COP26 ao Glasgow tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Angamba mety hisy ny fotoana hampidirana an'io hetsika vaovao io ao amin'ny UNWTO vaovao? Raha ampidirina ao anatin'ny UNWTO vaovao eo ambanin'ny fitarihana vaovao io hetsika io, dia misy ny fahafahana tena izy ho an'ny hery ara-pizahantany rehetra eran-tany hiditra ao amin'ity fikambanana fizahan-tany ity indray.
Efa ary imbetsaka no nataon'ireo firenena mpanorina an'io hetsika vaovao io ny famantarana ny firaisankina tahaka izao.
Ity fivoarana vaovao ity dia manamafy indray ny maha-zava-dehibe ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy hametraka ny fikambanana amin'ny lalana vaovao.
Mihasarotra kokoa isan'andro ny fahafahan'ireo minisitry ny fizahantany any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO mankany Madrid amin'ny faran'ity volana ity sy handray anjara amin'ny fivoriambe.
Ny Fihaonambe dia mety ho lasa fivorian'ny masoivoho any Madrid ho tombontsoan'ny firenena mpikambana vitsivitsy. Mety tsy hitondra ny isan'ny vato ilaina izany ary mety hanery fivoriana hafa any aoriana.
Na izany aza, zava-dehibe ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO sy ireo minisitra ao aminy ny mahatakatra ny maha zava-dehibe ny hetsika.
Ny filohan'ny ATB Cuthbert Ncube & Hon. Sekreteran'ny fizahantany Kenya Najib Balala
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina, nilaza eTurboNews Androany tamin'ny fitsidihana ofisialy tany Sénégal, "Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manoro hevitra an'i Afrika mba hiray hina sy hiara-hivory any Madrid amin'ny fivoriamben'ny UNWTO."
Izao no mety hitranga raha tsy voamarina ny Sekretera jeneraly ankehitriny amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy any Madrid amin'ny 3 Desambra 2021:
Ny Fihaonambe dia tsy manaiky ny tolo-kevitry ny Filankevitra Mpanatanteraka amin'ny toeran'ny Sekretera Jeneralin'ny Fikambanana.
Hanome toromarika ny Filankevitra Mpanatanteraka amin'ny fivoriana faha-115 hatao any Madrid, Espaina, ny 3 Desambra 2021, hanokatra dingana vaovao amin'ny fifidianana ny Sekretera jeneralin'ny fikambanana.
Hanome toromarika ny Filankevitra mpanatanteraka izany fa manana tetiandro farafahakeliny 3 volana sy 6 volana farafahatarany ny fizotran’ny fifidianana, manomboka amin’ny vaninandro fanokafana ny zotram-pifidianana.
Hanome toromarika ny Filohan’ny Filankevitra mpanatanteraka sy ny Sekretera jeneralin’ny fikambanana izy io mba hamory ireo mpikambana 116 ao amin’ny Filankevitra mpanatanteraka sy Fivoriambe miavaka amin’ny volana Mey 2022 amin’ny toerana sy daty hofaritana.
Raha toa ka tsy voamarina indray ny Sekretera jeneraly ankehitriny amin'ny fivoriambe ho avy, dia mety hanana fahafahana hafa hiditra amin'ny fifaninanana ara-drariny vaovao ho an'ity toerana ity izy.
Raha lazaina amin’ny teny hafa dia ho avy ny fifidianana vaovao sy marina izay ahazoan’ireo kandidà vaovao hifaninana sy hanao fampielezan-kevitra ho amin’izany toerana izany.
Maro no milaza fa tsy izany no nitranga tamin'ny Janoary 2021, rehefa nifidy an'i Zurab Pololikashvili indray ny Filankevitra Mpanatanteraka.
Maro no mino fa ity no lalana tsara indrindra ho an'ny hoavin'ny UNWTO sy ny fizahantany manerantany. Io ihany koa no lalana tsara indrindra ho an'ireo mety ho mpikambana vaovao, toa an'i Etazonia sy ireo firenena 10 izay vao nanatevin-daharana ny hetsika maneran-tany notarihan'i Arabia Saodita sy Espaina mba ho tonga hery mitondra ny ampitso vaovao sy tsara kokoa ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany.
Mety hametraka lova tsara ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO amin'izao fotoana izao.
Ireo Minisitra (Delege) UNWTO mikasa ny hanatrika ny fivoriambe any Madrid ny 28 Novambra – 3 Desambra dia mety hanao tantara ho an'ny fizahantany manerantany.
Ny tsy fanatrehana ny Fivoriambe dia mety hidika ho fahafahana very ho an'ny firenena iray tsy afaka amin'ity hetsika lehibe ity.
Iza no tsy hita ao amin'ny fivoriambe eTurboNews mpanao gazety. Tamin'ny Febroary 2018, eTurboNews Nitatitra tamim-pireharehana ny fanendrena an'i Marcelo Risi amin'ny maha tompon'andraikitra ambony amin'ny media an'ny UNWTO.
Hoy i Marcelo eTurboNews Tamin'ny Febroary 2018, rehefa nanontaniana hoe nahoana no tsy mahazatra sy sarotra intsony ny valin'ny UNWTO, ny valiny dia: "Misy fitsipika vaovao momba ny fomba fiasa sy ny fankatoavana."
Izao i Marcelo Risi ihany no nasaina hanao lisitra mainty eTurboNews avy amin'ny UNWTO ankehitriny, manery eTurboNews hanao fandaharana hafa mba handrakofana amin’ny fomba mahomby ity Fivoriambe lehibe ity.